Semalt Expert - Mutsva wekutanga weWeb Web Scraping Mu Python
Kugadzirwa kwewebhu kunonzi inoitwa software inoshandiswa kubvisa ruzivo kubva kune mamwe mawebsite. Chinonyanya kukosha chemuitiro ndechekushandura data isina kusimbiswa (HTML format) mune zvakagadzirirwa data (spreadsheet kana database). Pane nzira dzakasiyana-siyana dzekushandisa web kutengesa, asi nzira yakajairika uye iri nyore ndeyokushandisa Python. Izvi ndechokuti Python yakazara mune zvinyorwa sezvo ine "BeautifulSoup library" inobatsira mubasa rekubudisa mashoko.
Mumakore ose aya, kuve nekuwedzera kukuru mune zvinodiwa zvekutsvaga webhutori sezvo zvaratidza kuti zvinoshanda kune vakawanda. Pane dzimwe nzira dzakasiyana-siyana umo munhu anogona kukwanisa kubudisa ruzivo rwewebhu sekushandiswa kweAAPIs mumawebhusayithi akaita se Twitter, Google uye Facebook asi iyi haisi nzira yakarurama sekune mawebsite asingapa IPS.
Makirasirairi anotsvakirwa kubudiswa kwewebhu
Python imwe yezvinyorwa zvinonyanya kufarirwa mu webhutrabhu yepamusoro sezvo inobvumira munhu kuti ave nemataibhurari akawanda vanogona kuita imwe basa uye inonakidza uye iri nyore kutarisira. Iviri iyo inowanzoshandiswa pamhando yePython module mukunyora data inosanganisira Urllib2 uye BeautifulSoup. Urllib2 isimusi yePython inogona kushandiswa kutora ma URL. Kune rumwe rutivi, BeautifulSoup chigadzirwa chinoshandiswa kukwevera ruzivo rwakadai sematafura nemagrafu kubva pamapeji ewebhu.
Kuvhara peji yewebhu uchishandisa BeautifulSoup
BeautifulSoup ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha zvekushandisa webhu..Kuti ugone kupora peji yewebhu uchishandisa BeautifulSoup, kune matanho akasiyana-siyana aanofanira kutevera. Zvinosanganisira:
1. Tumira makabhaibheri anodiwa - mune izvi, imwe inotarisirwa kutumira mabhuku anonyanya kudiwa kuitira kuwana ruzivo rwavanoda
2. Shandisa basa "prettify "kutarisa nheyo yakasimbiswa ye HTML peji - iyi inhanho inokosha sezvo inobatsira mumwe kuziva magwaro aripo
3. Shanda neTime tag-mamwe emataki aya anosanganisira mateti (sou)
4. Tsvaga tafura yakarurama-kutsvaga tafura yakakodzera inokosha sezvo munhu achange akwanisa kuwana data yakarurama.
5. Bvisa ruzivo kune Data Data-iyi ndiyo danho rokupedzisira uye mune izvi, mumwe anokwanisa kuwana mhinduro dzavanoda.
Nenzira imwecheteyo, BeautifulSoup inogona kushandiswawo kuita mamwe marudzi akasiyana-siyana ekubvarura kwewebhu zvichienderana nezvinodiwa nemunhu.
Kune avo vanofunga kuti vanogona kushandisa maitiro anogara nguva dzose pane kutsvaira webhusa dzakadai seBlackSoup uye kuwana mimwe yakafanana. Izvi hazvibviri nokuti pane zvakawanda zvakasiyana pakati peS BeautifulSoup uye mazwi anowanzogara uye migumisiro yavo yekupedzisira yakasiyana chaizvo. Semuenzaniso, Nhamba dzakanaka dzeShowSoup dzinowanzova dzakasimba kudarika dzezvinyorwa nezvinyorwa zvekare.
Saka, kushandura webhuruti inzira yakanakisisa sezvo munhu anogona kukwanisa kuwana mhinduro yakanaka Source .